ချစ်ကြည်အေး: ဧည့်သည် လုပ်စားခြင်း
တနင်္ဂနွေ တညနေမှာ အိမ်လည် စားရဖို့ အကြောင်းဖန်လာတယ်။ သူများအိမ်တွေ လိုက် စား၊ ကိုယ့်ဖာသာလည်း စလုံးကျွန်း အနှံ့ လိုက်စား၊ စားပြီးရင်း စားနေတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ မောင်ငယ်လေး တယောက် အိမ်မှာပေါ့။ သူ့ ဘလောဂ့်မှာ အစားအသောက်ပုံတွေ မစားရအညှော်ခံ ကြည့်နေရတာ သွားပြောမိတာလေးကို...။ သူက စိတ်ကြီးတယ်။ ဒါမျိုး အပြောမခံဘူး..."အမ ကျနော့်အိမ် လာစားလှဲ့" တဲ့...။ ဒါနဲ့ ကျမရယ်၊ ညီမငယ် ၂ယောက်ရယ် ဘူကစ်ဂွန်းဘတ် တောင်ကြီးတွေ ရှိတဲ့နားက သူ့အိမ်မှာ ဧည့်သည်လုပ်ဖို့ ချီတက်သွားခဲ့ကြတယ်။
သူက အင်မတန် သိုသိုသိပ်သိပ် နေတတ်သူ။ သူ ဘလော့ဂ်ဂါမှန်း လူသိ နတ်ကြား အဖြစ်မခံဘူး...:P
ဧည့်ခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ပြုံးချိုနေတဲ့ အန်တီဒေါ်ဒေါ်က ဆီးကြိုလို့.... (ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ)
ဒါက Welcome Drink
ပထမဦးဆုံး မြည်းစမ်းခွင့်ရတာက အန်ကယ်ဦးလေးရဲ့ ပိန်းဥထမင်း။ စားကောင်းတယ် စိမ့်စိမ့်လေး...
တကယ်ပါ တကယ်ပါ သူ ကျမအိမ်မှာ ဧည့်သည် လာလုပ်တုန်းက လက်သံပြောင်ပြောင်နဲ့ တီးသွားတာကို ပြန်လက်စားချေခြင်း လုံးဝမဟုတ်ပါ။ စားကောင်းလွန်းလို့ ပန်းကန်လေးခမျာ ဝတ်လစ်စလစ် ဖြစ်သွားရှာတာ...:P
ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော့ ဘယ်ဟုတ်ဦးမလဲ၊ မြီးရှည် စားဖို့ ကျန်သေးတယ်။ ဗိုက် တလုံးထဲ ရှိတာ နာသကွာ...ကတောက် !!
မြီးရှည် အရည်ပါ။ အရသာ ပြေပြေလေးနဲ့ စားကောင်းတယ်...
ဂေါ်ဖီ၊ ပဲပင်ပေါက်၊ နံနံ နဲ့ အချဉ်လေးတွေ ထည့်အပြီး၊ မြီးရှည်တို့ ရှိအပ်သော အင်္ဂါရပ်နဲ့ ပြည့်စုံသွားရှာတဲ့ မြီးရှည်ပေါ့...
စားပြီးတော့ ဗိုက်လေးနေသေးလို့ ခဏ ထိုင်ရသေး၊ ပြီးမှ ဧည့်ခန်းထဲ ပြန်ရွှေ့ တီဗီကြည့်ကြ၊ စကားပြောကြ၊ သူတို့ သားအမိ စ နောက် စကားပြောနေတာလေးတွေ တပြုံးပြုံးနဲ့ နားထောင်ရ...
ပါးစပ်ကလည်း မူရကူး-ကုလားပဲချောင်းကြော် ဝါးရသေးတာ...မအားရဘူး ဆိုပါတော့:)
အချိန်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ည ၈ခွဲကျော်နေပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ အိမ်သားတွေကို နှုတ်ဆက်၊ နောက်တခါ လာပါအုံးမဲ့အကြောင်းလေး စကား စ ထားခဲ့ပြီး ပြန်ခဲ့ကြတော့တယ်။ အပြန်လမ်းတလျောက်မှာတော့ အိမ်သားတွေရဲ့ နွေးထွေးမှုက ရင်ထဲထိ ကြည်ကြည်နူးနူးလေး လိုက်ပါခဲ့တော့တာ။
မြီးရှည်ချက်ကျွေးတဲ့ ညီမ ၂ယောက်၊ ပိန်းဥထမင်းချက်ကျွေးတဲ့ အန်ကယ်ဦးလေး၊ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အန်တီဒေါ်ဒေါ်၊ ချစ်စရာ ဖော်ရွေတဲ့ ညီမငယ်လေး နဲ့ မောင်ငယ်ဘလောဂ့်ဂါ ငယ်နာမည် မောင်အာလူးလေးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီပိုစ့်လေးနဲ့ ချစ်ခင်စွာ ပြောလိုက်ပါရစေ...
P.S:အန်ကယ်ဦးလေးဆီက ပိန်းဥထမင်းချက်နည်း မေးခဲ့ပါတယ်။ ကျမ အရင် ချက်စားကြည့်ပြီး အဆင်ပြေ ဖြစ်ထွန်းခဲ့ရင် တင်ပေးပါမယ်
မောင်သီဟ Tue Sep 14, 10:22:00 PM GMT+8
ချက်တတ်ပြုတ်တတ်ကြတယ်နော် တကယ်မြည်းချင်ပါ့အစ်မရေ ..
အင်ကြင်းသန့် Tue Sep 14, 10:35:00 PM GMT+8
မိုက်တယ်ကွာ စားစရာတွေက....သြော်....ငါ့အစ်မများ အဲလိုသာသွားစားရမယ်ဆိုရင် ဂျင်းစုတ်ကို ခေါ်ဖို့တောင် သတိမရဘူး....မမရေးထားပုံအရ အဲဒီဘလော့ဂါမောင်အာလူးလေး (ငယ်နာမည်နောက်တစ်မျိုးမှာ မောင်ဗရုတ်ဟု ခိုင်လုံသောသတင်းရပ်ကွက်မှ ရထားပါသည်။) တို့မိသားစုက တော်တော်ဖော်ရွေသဘောကောင်းကြတာပဲနော်။ နောက်တစ်ခါလောက်ထပ်ချက်ကျွေးဖို့ ပြောလိုက်ပါလားဟင်....ဂျင်းလည်း လိုက်မယ်လေ....(((((ဟမ်)))))
Min Tue Sep 14, 10:43:00 PM GMT+8
invited by TZA
ဝက်ဝံလေး Tue Sep 14, 10:43:00 PM GMT+8
ဟက် မချစ်တို့ကောင်းစားနေပါကြောင်း ဟွင့် မလိုနာပါကြောင်း ဟောင်း ဟောင်းး ပြောသွားပါသည် ဒါဗြဲ
ကိုအောင် Tue Sep 14, 11:48:00 PM GMT+8
အစီအစဉ်က ကောင်းလှချည့်လား အမ။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Tue Sep 14, 11:52:00 PM GMT+8
အဲလို မြီးရှည်တော့ မစားဖူးဘူး...အဲဒါဘာမြီးရှည်ခေါ်သလဲ...
မန္တလေးမြီးရှည်...မိုးကုပ်မြီးရှည် တခုနဲ့မှ မတူတာအမှန်..
Sonata Cantata Tue Sep 14, 11:54:00 PM GMT+8
အလှူရှိတယ်လား...လော်ကြီးနဲ့ သီချင်းဖွင့်သံ သဲ့သဲ့လေးမှ မကြားလိုက်တာနာသကွာ...
ဖိုးပါကြီး၊ သန်းဖေလေး သားအဖတွေ (ကိုယ်ကချည်း လိုက်စားတာ) ဒီတချီ လွတ်သွားတယ်း)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Wed Sep 15, 01:22:00 AM GMT+8
ပိန်းဥထမင်းချက်ပြီးရင် လက်တို့လိုက်နော် အစ်မ
အဲ.. စလုံးမှာ ပိန်းဥရှိတယ်လား.......
ချက်လို့ပြီးရင် အစ်မက ပြန်ပို့ပေးး)
Anonymous Wed Sep 15, 01:28:00 AM GMT+8
ပန်းကန်တွေ ကြည့်တော့ သင်ဇာအေးပဲ ဖြစ်မယ် ဟင်းဟင်း
Touch Me Not Wed Sep 15, 06:50:00 AM GMT+8
ပိန်းဥထမင်းချက်လို့ အဆင်ပြေရင် ခေါ်ကျွေးပါမယ်လို့တော့ ပြောဘူး၊
လသာည Wed Sep 15, 08:39:00 AM GMT+8
အော် ဂလိုလားး)))အဲ့လို စိတ်ကြီးတဲ့ဘလော့ဂါ မောင်ငယ်လေးက ဒီမှာ ရှိရင်သိပ်ကောင်းမယ်.. သွားလည်ရမယ်။
စန္ဒကူး Wed Sep 15, 08:45:00 AM GMT+8
ပိန်းဥထမင်းချက်နည်းလေး မမချစ်ကြည်အောင်မြင်ရင် တင်ပေးမယ့်အချိန် စောင့်နေပါတယ်
~ဏီလင်းညို~ Wed Sep 15, 10:15:00 AM GMT+8
သဒ္ဓါလှိုင်း Wed Sep 15, 10:53:00 AM GMT+8
ပိန်းဥထမင်းမစားဖူးဘူးအမချစ်..။ တနင်္ဂနွေနေ့လေးမှာ အမချစ်က
Anonymous Wed Sep 15, 11:31:00 AM GMT+8
မနာလိုဘူးးး လက်တို့ဖော်တောင်မရဘူးနော် ။
ဖိုးတုတ် Wed Sep 15, 12:01:00 PM GMT+8
အဲဒီ့ဘလာ့ဂါ နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါ ၊ အစားကောင်းကောင်းကို မချစ်ကြည်အေးလို အလကားစားချင်လို့၊ ငွေစုချင်လို.ပါ ..
blackroze Wed Sep 15, 12:11:00 PM GMT+8
SHWE ZIN U Wed Sep 15, 01:02:00 PM GMT+8
မြသွေးနီ Wed Sep 15, 01:57:00 PM GMT+8
ပိန်းဥထမင်းလေးက very attractive နော်..။
ပြောင်နေတဲ့ ပန်းကန်က သက်သေပြနေပြီ..။ :P
An Asian Tour Operator Wed Sep 15, 02:07:00 PM GMT+8
ဖိုးပါကြီးတို့ သားအဖ တဲ့ ဟိဟိ
မလေးရှားလဲ လာခဲ့ပါလေ.. ဒီကလူတွေက သိပ်ဧည့်သည်မျှော် တာ။
Anonymous Wed Sep 15, 02:22:00 PM GMT+8
သူက အင်မတန် သိုသိုသိပ်သိပ် နေတတ်သူ။ သူ ဘလော့ဂ်ဂါမှန်း လူသိ နတ်ကြား အဖြစ်မခံဘူး...:P ဟီဟိ
အမချစ် တော်တော် နောက်တတ်တယ်
အမ ဘာရေးရေး ဖတ်ကောင်းနေအိ :D
TZA Wed Sep 15, 05:02:00 PM GMT+8
ညီမလေး Wed Sep 15, 05:17:00 PM GMT+8
Vista Wed Sep 15, 06:55:00 PM GMT+8
ပန်ကန်းတွေ ကြည့်တာနဲ့ သိတယ်နော်ဟွန်း
Shinlay Wed Sep 15, 08:23:00 PM GMT+8
စားကောင်းပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့ ဖြစ်မှာသေချာတယ်။
ညိမ်းနိုင် Wed Sep 15, 10:11:00 PM GMT+8
ပိန်းဥ ထမင်းချက်နည်း မျှော်နေမယ်။
Ko Boyz Wed Sep 15, 10:40:00 PM GMT+8
ကျိုင်းတုံ မုန့်တီနဲ့ တူလိုက်တာ...
ဇွန်မိုးစက် Wed Sep 15, 11:01:00 PM GMT+8
အစ်မက သူများဆီ ဧည့်သည်သွားလုပ်ပြီး စားပြီးပြီဆိုတော့ အစ်မဆီတလှည့် ဧည့်သည်လာပြန်လုပ်ပြီး စားမှာနော်။ :P
Anonymous Wed Sep 15, 11:19:00 PM GMT+8
ခွန်မြလှိုင် Thu Sep 16, 01:32:00 AM GMT+8
ပါးကြော လျှာကြောတွေတောင် စိမ့်သွားတယ်.. စိတ်ကြီးတယ် နက်ဖြန် ရှမ်းဆိုင် သွားစားပြီပဲ...
Cameron Thu Sep 16, 02:54:00 PM GMT+8
ပိန်းဥထမင်းလေး စောင့်မျှော်နေမယ် အမချစ်ရေ.... မြန်မြန်လေး ဗိုက်ဆာနေပြီ........
Moe Cho Thinn Fri Sep 17, 06:53:00 AM GMT+8
ဟိုတယောက်ကို မေးပေးပါ။ ဒီလိုပဲ ရွေးကျွေးသလားးးး
ချိုကျ Fri Sep 17, 04:50:00 PM GMT+8
အမချစ်ရဲ့ဝါးတီးတွေကို မောင်လေးချိုကျ လာမျှော်သွားပါ၏ ဟိဟိ
Dream Sat Sep 18, 12:47:00 AM GMT+8
မက်မက်ကိုကျတော့ မခေါ်တွားဘူးးးးးးးးးးးးးးးး(
တီတီတို့ဆီမှာ ဘယ်တော့ ချက်မှာလဲ... လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့
အတိုးနဲ့ ပြန်လာစားမလို့... ခစ်ခစ်
တီတီ ရေ အခုတော့ ဂလု တွားတယ်...လက်တို့လိုက်နော...
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) Sat Sep 18, 10:26:00 PM GMT+8
ဧည့်သည်သွားလုပ်ရတာ ဟန်ကျတယ်နော်။ ဇိမ်ဘဲ။း)))
KT Wed Sep 29, 10:43:00 AM GMT+8
missing one thing!!! NEWSPAPER.....!!!!!! :)